ပေါတော တောနေတတ်တဲ့ ပျိုမေတွေဟာ သာမန်လူတွေထက် ဥာဏ်ရည်မြင့်တဲ့သူတွေပါ - Real Gaming Myanmar
ပေါတော တောနေတတ်တဲ့ ပျိုမေတွေဟာ သာမန်လူတွေထက် ဥာဏ်ရည်မြင့်တဲ့သူတွေပါ
လောကမှာ စာတော်တာတစ်မျိုးတည်းနဲ့ ဥာဏ်ရည်ကိုတိုင်းတာလို့မရ ပါဘူး။ လူတိုင်းမှာ အားနည်းချက် အားသာချက် ကိုယ်စီ ရှိသလို၊ သင်လုံးဝမထင်ထားတဲ့ သူတွေကလည်း အရမ်းကို ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်နေတာမျိုးတွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမယ့် အရာလေးတွေကတော့ ပေါတောတောနေတဲ့ ကောင်မလေးတွေဟာ ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်တဲ့ သူတွေဖြစ်ကြောင်း သိစေနိုင်တဲ့အချက်တွေပါ။ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော် …. ။
(၁) လူတိုင်းနဲ့ တည့်တယ်
ပေါတော တောနေတဲ့ကောင်မလေးတွေဟာ လူတိုင်းနဲ့တည့်ပါတယ်။ သူတုိ့တွေ ပေါတောတောနေတယ် ဆိုတာကလည်း လူအားလုံးနဲ့ အဆင်ပြေအောင်လို့ပါ။ သူတို့ဟာ လူတစ်ယောက်ကို ပျော်အောင်ဘယ်လို လုပ်ပေးရမယ်၊ ရယ်အောင်ဘယ်လို လုပ်ပေးရမလဲ၊ ပြောပေးရမလဲဆိုတာ ကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ ဒါဟာ ဥာဏ်ရည်မြင့်မားတဲ့ လက္ခဏာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော် …. ။
(၂) ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပျော်အောင်ထားနိုင်တယ်
လူတော်တော်များများဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပျော်အောင်မထားတတ်ကြပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေဟာ သူများအပေါ်မှာပဲ မှီတည်နေလေ့ရှိပါတယ်။ ပေါတောတောနေတတ်တဲ့သူလေးတွေကတော့ သူများကို ပျော်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ရုံသာမက၊ သူတို့ကိုယ်သူတို့လည်း ပျော်အောင် ထားနိုင်တဲ့သူတွေပါ။ သူတို့ဟာ စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန် ဘယ်လိုပျော်အောင် နေရမလဲ ဆိုတာ ကောင်းကောင်းသိတဲ့အပြင် စိတ်ညစ်စရာတွေကိုလည်း ပျော်စရာအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ သူတွေပါ။ ဒါဟာ ဥာဏ်ရည်မြင့်မားတဲ့ လက္ခဏာတွေထဲကတစ်ခုပါပဲ …. ။
ပေါတော တောနေတဲ့ကောင်မလေးတွေဟာ လူတွေရဲ့စိတ်ကို ကောင်းကောင်းသိကြပါတယ်။ ဘယ်သူကစိတ်ကောင်းရှိတယ်၊ ဘယ်သူက စိတ်ပုတ်တယ်ဆိုတာကို သိနိုင်ကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ ပေါတောတောနေပေမယ့် လူတွေကို အမြဲတမ်းအကဲခတ်နေတဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ပေါတောတောနေလို့ ဘယ်သူက သူတို့ကို လှောင်စရာအဖြစ် မမြင်ပါဘူး။ ဘယ်သူက တကယ်ချစ်ခင်လဲ၊ ဘယ်သူက ဘယ်လိုစိတ်သဘာဝရှိလဲဆိုတာကိုလည်း တန်းသိနေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပေါတောတောနေတိုင်း အချဉ်မဟုတ်ပါဘူး၊ သင်မထင်ထားလောက်အောင် ဥာဏ်ရည်မြင့်တယ်ဆိုတာကို အမှတ်ရပါ … ။
တစ်ချို့တွေက ပေါတောတောနေလို့ အရမ်းပွင့်လင်းမယ်လို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ တစ်ချို့နေ ရာတွေမှာ သူတို့က ပွင့်လင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ပြသလောက်ပဲ သင်မြင်ရတာပါ၊ သူတို့မမြင်စေချင်တဲ့ ခံစားချက်တွေ၊ ရင်ထဲက အနာတရတွေနဲ့ လူမသိစေချင်တဲ့ အရာတွေဆိုရင် ထုတ်မပြောမချင်း သင်သိခွင့်ရမှာ မဟုတ်သလို၊ ဘယ်တော့မှလည်း ရိပ်မိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အကြောင်းရင်းကတော့ သူတို့ဟာ ဥာဏ်အရမ်းမြင့်သူတွေ ဖြစ်တာကြောင့် သူတုိ့ထုတ်မပြချင်တဲ့ အရာတွေကို ပိရိစွာ သိုဝှက်တတ်လို့ပါပဲ …..။
လောကမှာ စာတျောတာတဈမြိုးတညျးနဲ့ ဉာဏျရညျကိုတိုငျးတာလို့မရ ပါဘူး။ လူတိုငျးမှာ အားနညျးခကျြ အားသာခကျြ ကိုယျစီ ရှိသလို၊ သငျလုံးဝမထငျထားတဲ့ သူတှကေလညျး အရမျးကို ဉာဏျရညျထကျမွကျနတောမြိုးတှေ ရှိနတေတျပါတယျ။ ခုဖျောပွပေးမယျ့ အရာလေးတှကေတော့ ပေါတောတောနတေဲ့ ကောငျမလေးတှဟော ဉာဏျရညျထကျမွကျတဲ့ သူတှဖွေဈကွောငျး သိစနေိုငျတဲ့အခကျြတှပေါ။ ကွညျ့လိုကျရအောငျနျော …. ။
ပေါတော တောနတေဲ့ကောငျမလေးတှဟော လူတိုငျးနဲ့တညျ့ပါတယျ။ သူတို့တှေ ပေါတောတောနတေယျ ဆိုတာကလညျး လူအားလုံးနဲ့ အဆငျပွအေောငျလို့ပါ။ သူတို့ဟာ လူတဈယောကျကို ပြျောအောငျဘယျလို လုပျပေးရမယျ၊ ရယျအောငျဘယျလို လုပျပေးရမလဲ၊ ပွောပေးရမလဲဆိုတာ ကောငျးကောငျးသိပါတယျ။ ဒါဟာ ဉာဏျရညျမွငျ့မားတဲ့ လက်ခဏာတှထေဲက တဈခုဖွဈပါတယျနျော …. ။
လူတျောတျောမြားမြားဟာ ကိုယျ့ကိုယျကို ပြျောအောငျမထားတတျကွပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ ပြျောရှငျမှုတှဟော သူမြားအပျေါမှာပဲ မှီတညျနလေရှေိ့ပါတယျ။ ပေါတောတောနတေတျတဲ့သူလေးတှကေတော့ သူမြားကို ပြျောအောငျလုပျပေးနိုငျရုံသာမက၊ သူတို့ကိုယျသူတို့လညျး ပြျောအောငျ ထားနိုငျတဲ့သူတှပေါ။ သူတို့ဟာ စိတျညဈနတေဲ့အခြိနျ ဘယျလိုပြျောအောငျ နရေမလဲ ဆိုတာ ကောငျးကောငျးသိတဲ့အပွငျ စိတျညဈစရာတှကေိုလညျး ပြျောစရာအဖွဈ ပွောငျးလဲနိုငျစှမျးရှိတဲ့ သူတှပေါ။ ဒါဟာ ဉာဏျရညျမွငျ့မားတဲ့ လက်ခဏာတှထေဲကတဈခုပါပဲ …. ။
(၃) လူတှရေဲ့စိတျကို ကောငျးကောငျးသိတယျ
ပေါတော တောနတေဲ့ကောငျမလေးတှဟော လူတှရေဲ့စိတျကို ကောငျးကောငျးသိကွပါတယျ။ ဘယျသူကစိတျကောငျးရှိတယျ၊ ဘယျသူက စိတျပုတျတယျဆိုတာကို သိနိုငျကွပါတယျ။ သူတို့ဟာ ပေါတောတောနပေမေယျ့ လူတှကေို အမွဲတမျးအကဲခတျနတေဲ့သူတှေ ဖွဈပါတယျ။ သူတို့ ပေါတောတောနလေို့ ဘယျသူက သူတို့ကို လှောငျစရာအဖွဈ မမွငျပါဘူး။ ဘယျသူက တကယျခဈြခငျလဲ၊ ဘယျသူက ဘယျလိုစိတျသဘာဝရှိလဲဆိုတာကိုလညျး တနျးသိနကွေပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ပေါတောတောနတေိုငျး အခဉျြမဟုတျပါဘူး၊ သငျမထငျထားလောကျအောငျ ဉာဏျရညျမွငျ့တယျဆိုတာကို အမှတျရပါ … ။
တဈခြို့တှကေ ပေါတောတောနလေို့ အရမျးပှငျ့လငျးမယျလို့ ထငျတတျကွပါတယျ။ တဈခြို့နေ ရာတှမှော သူတို့က ပှငျ့လငျးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ပွသလောကျပဲ သငျမွငျရတာပါ၊ သူတို့မမွငျစခေငျြတဲ့ ခံစားခကျြတှေ၊ ရငျထဲက အနာတရတှနေဲ့ လူမသိစခေငျြတဲ့ အရာတှဆေိုရငျ ထုတျမပွောမခငျြး သငျသိခှငျ့ရမှာ မဟုတျသလို၊ ဘယျတော့မှလညျး ရိပျမိမှာမဟုတျပါဘူး။ အကွောငျးရငျးကတော့ သူတို့ဟာ ဉာဏျအရမျးမွငျ့သူတှေ ဖွဈတာကွောငျ့ သူတို့ထုတျမပွခငျြတဲ့ အရာတှကေို ပိရိစှာ သိုဝှကျတတျလို့ပါပဲ …..။
Previous: အခုခေတ်မှာ ကွက်တိမှန်နေတဲ့ ရှေးလူကြီးတွေ ပြောခဲ့တဲ့ အတိတ်တဘောင်တွေ..
Next: ပုဆိုးပြောင်းပြန်ဝတ်မိတဲ့ အပေါ် ဟိန်းမင်းသူ တောင်းပန်